192.168.8.100 - အက်မင်ဝင်ရန် - Username နှင့် Password
192.168.8.100 သီးသန့်ကွန်ယက်အတွင်း၌သာအသုံးပြုရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အိုင်ပီလိပ်စာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီလိပ်စာကို modems, router များနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောအခြား gadgets များကအသုံးပြုသည်။ သင် router အတွက် login ရယူဖို့ကြိုးစားနေပါသလား။ သင်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအိုင်ပီလိပ်စာကိုပိတ်ထားသောကွန်ယက်များအတွင်းရှိ gadget တစ်ခုသို့ခွဲဝေချထားပြီးအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေရန်အတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရရှိနိုင်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကွန်ရက်များအတွင်း၌ IP လိပ်စာများပျံ့နှံ့သွားခြင်းကိုရိုးရှင်းစေရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်လိပ်စာများကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောအခြေအနေကိုရှင်းလင်းခြင်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ IP လိပ်စာတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
Router Admin PWs များ 192.168.8.100 & 192.168.8.100 Login IP ဆိုသည်မှာ Linksys & more network ကဲ့သို့ router များသည် gateways သို့မဟုတ် access point များအဖြစ်အသုံးပြုသော IP address ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများသည် network administrator များအားသူတို့၏ network နှင့် router များစီစဉ်ရန်အတွက် router admin access ကို address ထဲမှာတည်ဆောက်သည်။ အထူးသဖြင့်လုံခြုံရေးအခွင့်အလမ်းများ၊ DNS, proxy၊ IP QoS, LAN, WLAN ဆက်တင်များ၊ ကွန်ယက်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အခြားသူတွေအကြား။
ဖြတ်. 192.168.8.100 IP address သည် router software မှပေးထားသော configurations & settings ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင့် Router Admin ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ 192.168.8.100 သို့မဟုတ်ရေးရန် 192.168.8.100 သင့်ရဲ့ browser ၏ address bar မှာ။
ဒီမအောင်မြင်လျှင်, ထို့နောက် 192.168.8.100 သင်၏ IP address သည် router မဟုတ်ပါ။ သင် router ၏အိုင်ပီလိပ်စာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးနောက်သင်၏ URL browser လိပ်စာသို့တင်ပြပါ။ သငျသညျအသုံးပြုသူ၏ login panel ကိုခေါ်ဆောင်သွားနေကြသည်။ ဤတွင်သင်၏ router ကိုအသုံးပြုသူ & PW ကိုတင်ပြ။
သင်၏ username & PW ကိုပြန်မမှတ်မိပါကပြန်လည်ရရှိရန်ဤ command များကိုလိုက်နာပါ။ သင်ပြုပြင်မထားဘူးဆိုရင် ပုံမှန် PWs & အသုံးပြုသူ router မှာပေါ်လာတဲ့ပုံအတိုင်းသင်က default passwords & usernames list ကိုသွားသင့်တယ်။ Router ၏ admin panel များ၌သင်ရောက်နေပြီးနောက် Internet setting တိုင်းကို ပြောင်းလဲ၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
192.168.8.100 (loading သို့မဟုတ်တိုးချဲ့တင်မဟုတ်) သည်သင်၏ router ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ပြfacingနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုရင် network များသည်ပုံဥပမာအတွက်လိပ်စာအသစ်တစ်ခုကိုသုံးစွဲနေခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ 10.0.0.1, 192.168.2.1, 192.168.0.1။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမှာလိပ်စာစစ်ဆေးပါ router IP စာရင်း.
အကယ်၍ သင်သည်အိမ်ကွန်ယက်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ပြီးစမတ်ဖုန်း၊ စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာ၊ တက်ဘလက်နှင့်လက်တော့တစ်လုံးရှိပါက။ Central router မှတစ်ဆင့်ဤ gadgets များသည်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ အများသုံးအိုင်ပီလိပ်စာနှင့်သတ်မှတ်ထားသောကွန်ယက်ပေါ်ရှိသီးခြားထုတ်ကုန်နေရာတွင်သတ်မှတ်ထားသောအများပြည်သူ IP Address ကို သင်အသုံးပြုမည့်အကြောင်းသည် router ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Router သည် public IP address ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့သော်သီးသန့်လိပ်စာကို၎င်းနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည် DHCP ပရိုတိုကော ကွန်ယက်ပေါ်တွင်အားလုံး devices များရန်။ သင်၏ကွန်ယက်ရှိ gadgets များသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အိုင်ပီလိပ်စာကို အသုံးပြု၍ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သယ်ဆောင်လိမ့်မည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလွယ်ကူစေရန် router သည်အများသုံးအိုင်ပီလိပ်စာကိုသုံးနိုင်သည်။ အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်နေစဉ်၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင် IP လိပ်စာများကိုလျှို့ဝှက်ထားမှာဖြစ်ပြီး၊ အများသုံးအိုင်ပီလိပ်စာများသာသိသာနိုင်သည်။
ဘို့ 192.168.8.100 IP tracing အထောက်အထားကို PC ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဟာ့ဒ်ဝဲအင်တာနက်ပရိုတိုကောလိပ်စာသည် IPv4 အင်တာနက်ပရိုတိုကောလိပ်စာ၏သင့်လျော်သောသတ်မှတ်ချက်ကိုကြည့်သည်။
admin ရဲ့ admin ရဲ့
admin ရဲ့ (ဘယ်သူမျှမ)
admin ရဲ့ စကားဝှက်ကို
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား routerips များ post navigation
ပုံမှန် Router Password ကိုစာရင်း
Ip Addresses စာရင်း
2wire Router ဝင်မည်
3Com Router ဝင်ပါ
3JTech Router ဝင်မည်
Arris Router ဝင်မည်
Asus Router ဝင်ပါ
Belkin Router ဝင်ပါ
Buffalo Router ဝင်မည်
Cisco သည် Router ဝင်မည်
Comtrend Router ဝင်မည်
D-link Router ကို Login ဝင်ပါ
Linksys Router ဝင်မည်
Netgear Router Login ဝင်ပါ
TP-Link ကို Router ဝင်မည်
TRENDnet Router ဝင်မည်
ZyXEL Router ဝင်မည်
လူကြိုက်များ IP ၏